RASMI: Kooxda Derby County Oo War Cusub Ka Soo Saartay Xaalada Wada Xaajoodkii Chelsea & Frank Lampard. - Gool24.Net
RASMI: Kooxda Derby County Oo War Cusub Ka Soo Saartay Xaalada Wada Xaajoodkii Chelsea & Frank Lampard.
Kooxda Derby County ayay qasab ku noqotay in ay war saxaafadeed labaad ka soo saarto xaalada macalinka kooxdeeda ee Frank Lampard kaas oo todobaadyadii ugu danbeeyay wada xaajood kula jiray kooxdiisii hore ee Chelsea.
Kadib markii ay kooxda Derby County hore u shaacisay in ay ogolaansho Frank Lampard u siisay in uu wada xaajood la galo Chelsea, waxay hadda soo saareen war saxaafadeed ay waqti ugu qabteen maamulka Chelsea iyo Frank Lampard in ay heshiis ku gaadhaan.
Maanta oo isniin ah iyo barri oo talaado ah ayuuna Frank Lampard ka soo muuqan doonin xarunta tababarka kooxda Derby County waxayna kooxdani sheegtay in labadan laammood loogu kordhiyay Chelsea iyo Lampard si ay heshiis u gaadhi karaan.
Kooxda Derby County ayaa doonaysa in ay badalka Frank Lampard raadsato haddii ay Chelsea heshiis buuxa gaadhaan halka haddii kale uu kooxda la bilaaban doono tababarka loogu diyaar garoobayo xili ciyaareedka cusub.
War saxaafaadeedka ay kooxda Derby County ee Lampard ayaa lagu yidhi: “kooxda kubbada cagta Derby County waxay Frank Lampard uga cudur daartay in aanu ka soo xaadirin tababarka xili ciyaareedka ka horeeya ee isniinta iyo talaadada si loogu ogolaato wada xaajoodya ee suurtogalnimada uu Chelsea ugu biirayo si loogu soo gaba gabeeyo sida ugu deg dega badan ee ugu suurotgalsan”.
Waxa kale oo war saxaafadeedka kooxda Derby County lagu sheegay in haddii uu Lampard heshiis la gaadho Chelsea ay suuqa u gali doonaan tababare cusub.
qoraalka Derby County ayaa lagu sii yidhi: “U qaadashada in Frank uu heshiis la gaadhi doono Chelsea oo uu noqon doono tababarahooda cusub, kooxdu waxay xoojin doontaa dadaalkeeda ay ku raadinayso badalkiisa”.
Qoraalkan ay soo saartay kooxda Derby County ayaa loo arkayaa in uu xaqiijinayo in Frank Lampard uu kooxdeeda ka baxayo isla markaana uu Chelsea si rasmi ah ugu biiri doono 48 ka saacadood ee soo socda.
Frank Lampard ayaa maanta oo isniin ah ka soo muuqan lahaa xarunta tababarka kooxda Derby County laakiin iyada oo ay socdaan wada xaajoodyada loogu magacaabayo tababaraha cusub ee Chelsea waxay Derby go’aan ku gaadhay in ay maanta iyo barri fasaxa Lampard ku kordhiso si heshiiskiisa Blues loogu dhamaystiro.